တရုတ်နိုင်ငံသည်ထိုင်းနိုင်ငံရှိထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက် PVC ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောအဆို့ရှင်အပြာရောင်ကိုယ်ထည် နေပြည်တော်
ပုံစံအသစ် PVC ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဘောလုံးအဆို့ရှင်သည်ထိုင်းစျေးကွက်အတွက်
အရွယ်အစား: 1/2 "- 4"
ပူးတွဲအဆုံး: Socket (ANSI / DIN / JIS / BS) Thread (NPT / BSPT)
အလုပ်ဖိအား 1/2 "- 2" PN16 = 232PSI2-1 /2"- 4" PN10 = 150PSI
အသုံးပြုခြင်း - စိုက်ပျိုးရေးဆည်မြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး / ရေကူးကန် / အင်ဂျင်နီယာဆောက်လုပ်ရေး
အရောင် choice ရွေးချယ်ရန်အတွက်အရောင်များစွာရနိုင်သည်
မီဒီယာ၏အပူချိန်: မြင့်မားသောအပူချိန်, အနိမ့်အပူချိန်, အလတ်စားအပူချိန်, ပုံမှန်အပူချိန်
ကုန်ပစ္စည်းသက်တမ်း:：> 500,000 Times Open & Close
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ဘောလုံးအဆို့ရှင်သည်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့်၎င်း၏သက်တမ်းသည်ထိရောက်စွာတိုးချဲ့နိုင်ပြီးထုတ်ကုန်ကိုယ်တိုင်သည်အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ မြင့်မားသောစွမ်းအားနှင့်ယိုစိမ့်မှုနှင့်အတူစားသုံးသူများကအလွန်ချီးကျူးကြသည်။ သူတို့ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာအိမ်တွင်းနဲ့အပြင်ဘက်ရေနုတ်မြောင်းအပါအ ၀ င်၊
ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်လေဝင်လေထွက်ပိုက်နှင့်ရေနုတ်မြောင်းပိုက်လိုင်းများအတွက်လည်းသင့်လျော်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အမျိုးမျိုးသောအသုံးချအခြေအနေများအတွက်ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းအတွက်ပင်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ၁၀၀% ယိုစိမ့်မှုသည်သင်ရရှိသောထုတ်ကုန်များသည်သေချာကြောင်းသေချာစေရန်။ ထုတ်ကုန်များအတွင်းနိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်ပုံမှန်ထုတ်ကုန်များစစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ရေပူရေအေးနှင့်ပလတ်စတစ်ပိုက်များ၏စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအင်ဂျင်နီယာအသုံးချမှုများတွင်ပလပ်စတစ်ပိုက်များ၏အချိုးအစားမှာဆက်လက်မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှပလတ်စတစ်ပိုက်စနစ်များရှိပလပ်စတစ်အဆို့ရှင်များ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုသည် ပို၍ အရေးကြီးလာသည်။
4. Compact ဘောလုံးအဆို့ရှင်ကိုတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်
၅။ အနိမ့်ဆုံးယိုစိမ့်မှု၊ ၁၀၀% ကိုထုပ်ပိုးခြင်းမပြုမီစမ်းသပ်စစ်ဆေးသည်
ဘောလုံးအဆို့ရှင်၏ ၇ လက်ကိုင်ပစ္စည်း - ABS၊ ကိုယ်ထည်ပစ္စည်း - PVC
10. ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောအဆိပ်မဟုတ်ပါ
၁၁။ နေ့စဉ်ဘဝတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသော - ဆောက်လုပ်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးဆည်မြောင်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ဥယျာဉ်၊ ရေကူးကန်…
၁၂။ ဤဘောလုံးအဆို့ရှင်ကို ၂၀ မီလီမီတာမှ ၁၁၀ မီလီမီတာ (၁/၂ မှ ၄” အထိ) အရွယ်အစားဖြင့်ကမ်းလှမ်းသည်။
ရရှိနိုင်သော 13. အရောင် - အစိမ်း၊ မီးခိုးရောင်၊ အဖြူ၊ အညို၊ အပြာ
14. လက်မှတ်: က ISO 9001, တရုတ်စမ်းသပ်
မဟုတ်ဘူး။ အပိုင်း ပစ္စည်း ပတ်
1 ခန္ဓာကိုယ် UPVC, CPVC 1
2 O-Ring ကိုအဓိကအားထား EPDM၊ FPM (NBR) 1
3 ပင်စည် UPVC, CPVC 1
4 ဘောလုံး UPVC, CPVC 1
5 ထိုင်ခုံတံဆိပ်ခတ် TPE, TPVC, TPO 2
7 ကိုင်တွယ် PVC, ABS 1
8 ဝက်အူ SS304, သံမဏိ 1
မော်ဒယ်အရွယ်အစား parameter သည်နှိုင်းယှဉ်စားပွဲပေါ်မှာ
ပုံစံ DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
အရွယ်အစား ၁/၂″ 3/4″ ၁″ ၁-၁ / ၄″ ၁-၁ / ၂″ ၂″ ၂-၁ / ၂″ ၃″ ၄″ လက်မ
thd./in NPT 14 14 ၁၁.၅ ၁၁.၅ ၁၁.၅ ၁၁.၅ 8 8 8 မီလီမီတာ
BSPT 14 14 11 11 11 11 11 11 11 မီလီမီတာ
JIS ငါ 20 23 25 27 31 34 45 50 55 မီလီမီတာ
d1 ၂၂.၃ ၂၆.၃ ၃၂.၃၃ ၃၈.၄၃ ၄၈.၄၆ ၆၀.၅၆ 76.6 ၈၉.၆ ၁၁၄.၇ မီလီမီတာ
d2 ၂၁.၇ ၂၅.၇ ၃၁.၆၇ ၃၇.၅၇ ၄၇.၅၄ 59,44 ၇၅.၈၇ 88,83 113.98 မီလီမီတာ
ANSI ငါ 20 23 25 27 31 34 45 50 55 မီလီမီတာ
d1 ၂၁.၅၄ ၂၆.၈၇ ၃၃.၆၅ ၄၂.၄၂ 48.56 60,63 73.38 89,31 ၁၁၄.၇၆ မီလီမီတာ
d2 ၂၁.၂၃ ၂၆.၅၇ ၃၃.၂၇ ၄၂.၀၄ ၄၈.၁၁ ၆၀.၁၇ 72.85 88.7 ၁၁၄.၀၇ မီလီမီတာ
Din ငါ 20 23 25 27 31 34 45 50 55 မီလီမီတာ
d1 ၂၀.၃ ၂၅.၃ ၃၂.၃ ၄၀.၃ ၅၀.၃ 63.3 ၇၅.၃ ၉၀.၃ ၁၁၀.၄ မီလီမီတာ
d2 20 25 32 40 50 63 75 90 110 မီလီမီတာ
ဃ 15 19 24 30 34 45 55 70 85 မီလီမီတာ
ဇ 37 55 66 73 81 91 99 121 134 မီလီမီတာ
က 68 80 94 100 110 136 170 210 236 မီလီမီတာ
L 77 91 103 111 123 146 178 210 255 မီလီမီတာ
: D 30 ၃၅.၅ 43 52 62 75 91 106 130 မီလီမီတာ
ရှေ့သို့ ထိုင်းစျေးကွက်အတွက် PVC ကျစ်လစ်သောဘောလုံးအဆို့ရှင်အပြာရောင်ကိုယ်ထည်
ကြေးဝါကိုထည့်သွင်းနှင့်အတူအစိမ်းရောင်အရောင် ppr fittings
အဖြူရောင် PPR ကြေးဝါထည့်အထီးတံတောင်ဆစ်
အဖြူရောင် PPR ကြေးဝါထည့်အမျိုးသမီး Tee
မီးခိုးထည့်ခြင်းနှင့်အတူမီးခိုးရောင်အရောင် PPR fittings socket
PN16 UPVC Fittings အမျိုးသမီး Socket